Mourinho oo ugu dambeyn ka baxay aamusnaanta si uu kaga hadlo wararka loola xiriirinayo kooxaha Real Madrid iyo Inter Milan – Gool FM
Mourinho oo ugu dambeyn ka baxay aamusnaanta si uu kaga hadlo wararka loola xiriirinayo kooxaha Real Madrid iyo Inter Milan
Dajiye January 10, 2019
(Yurub) 10 Jan 2019. Macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa ka baxay aamusnaanta si uu kaga hadlo wararka loola xiriirinayo kooxo badan oo Yurub ah, sida Real Madrid, Benfica iyo Inter Milan, kadib markii laga ceyriyay shaqada Manchester United.
Jose Mourinho ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mundo Deportivo” wuxuu kaga jawaab celiyay wararka lala xiriirinayo kooxo badan ee Yurub ah, sida Real Madrid, Benfica iyo Inter Milan.
“Ma doonayo in xiligan aan ku laabto Portugal”.
“Anigu kama hadlayo warar xanta ah, si aysan u qaadanin muhimad badan, ha noqoto mid wanaagsan ama mid xun”.
“Waqtigan xaadirka ah waxaan u imid Portugal si aan waqtiga ciida Christmas-ka kula qaato qoyskeyga iyo saaxiibadey, waxaana dib ugu laaban doonaa, magaalada London si aan u maareeyo nolosha qoyskeyga”.
“Waxaan u maleynayaa marka ay kooxdu kugu casuunto inaad ku soo noqoto, ma ahan khamaar, waa wax wanaagsan, markii aan dib ugu soo laabtay Chelsea waxaan dareemay sidaas oo kale, waxaana sameeyay wax wanaagsan”.
Keylor Navas oo fariin muhiim ah u diray tababaraha kooxda Real Madrid Santiago Solari
"Waan HURDEYNAY/JIIFNAY qeybta hore ee Ciyaarta iyaguna waa naga faa'iideysteen.".- Busquets oo ka hadlay Guul daradii Xalay soo gaartay Barcelona